Shina CPLA + akorandriaka mifototra vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika tsy misy fanavaozana 6 santimetatra vita amin'ny makiazy. Gianty
CPLA + Bamboly akorandriaka vita amin'ny plastika azo alaina azo vita amin'ny plastika misy enina 6 santimetatra
Inona no manamboatra ireo tapa-tarehy amin'ny sakaizan'ny tontolo iainana?
Ny akora fanavaozana mifototra amin'ny lozika, mifototra amin'ny zavamaniry! Ity fitaovana ity dia midika fa ny fivarotana dia azo atao solosaina ara-barotra amin'ny herinandro 12 aorian'ny fampiasana. Hanampy anao hampiala ny fako hiala ny tondra-drano izany fa ho solon'ny zavamaniry manankarena izay mahavelona.
Ity fitaovana azo havaozina ity dia midika fa ny cutlery dia tsara kokoa noho ny harena voajanahary eto an-tany noho ireo namboarina tamin'ny plastika vita amin'ny menaka nentim-paharazana. Ka na tsy afaka mandefa azy ireo any amin'ny tobim-pamokarana ara-barotra aza ianao, ny fampidinana amin'ny tranom-paty dia mbola hanampy amin'ny fampihenana ny fiantraikany amin'ny planeta.
Inona koa ny lehibe hafa mikasika ny CPLA?
Koa satria ny CPLA dia voatosika ho tanjaka fanampiny, ireo koba ireo dia matanjaka ary ampiasaina amin'ny sakafo matroka nefa tsy tapaka na manapotika. Ny akora CPLA dia midika fa ny cutlery dia mety ampiasaina amin'ny mari-pana hatrany amin'ny 85 ° C, ka mahatonga azy ireo ho tonga lafatra tsara amin'ny sakafo mafana sy mangatsiaka.
Color Fotsy, mainty, miloko
Previous: CPLA + Bamboly akorandriaka mifototra amin'ny plastika tsy misy kitapom-batsy azo refesina 7 santimetatra
Manaraka: CPLA Kit-namboarina azo avy amin'ny plastika tsy misy vita amin'ny plastika - kitapo taratasy